UV Siraad Germicidal, UV Light, Ultraviolet Light - Kanfur
254nm UVC Siraaj
222nm Far UVC laambad
"Tayada ugu fiican, adeegga ugu fiican" had iyo jeer waa ujeedkeena shirkadeena, Kanfur wuxuu ciyaari doonaa faa iidooyinka tikniyoolajiyadeena si aan u siino macaamiisha wax soo saarka ugu tayada wanaagsan, qiimaha ugu wanaagsan, shabakad iibin kaamil ah iyo adeegga iibka kadib oo aan isku dayno sida ugu wanaagsan ee aan u qabanno Caafimaadka Aadanaha!
Alaabada iibinta kulul
Madhalays ka dhigid, jeermis dila, urka qaaska ah meesha ka saar, wuxuu kuu keenayaa nolol kuleyl leh
35W UV laambad
Sanduuqa nadiifinta UV
tarooli light UV
Kanfur waxay ku faaneysaa inay soo bandhigto 222nm Far UVC Lamps, khadkayaga nalalka laydhka ah ee loo yaqaan '222nm Far UV-C excimer modules' ee loogu talagalay codsiyada yareynta microbial.
Shaandhaynta 222nm Far UVC Lamps si nabadgelyo leh ayaa loogu isticmaali karaa meelaha cidla ah iyo meelaha la degan yahay iyada oo aan wax khatar caafimaad ah loo gaysanaynin bina-aadamka markii loo adeegsado xadka soo-gaadhista ee imika lagu taliyay Shirka Maraykanka ee Nadaafadda Warshadaha Dawladda (ACGIH®) ama shuruudaha IEC 62471.
Waxyeello uma geysaneyso dadka iyo xayawaanka, aad ayey uga ammaan badan tahay tan caadiga ah 254 nm laambadda UVC
Teknoolojiyada Sifeeyaha Nabadgelyada Lahaanshaha waxaa ku jira si loo hubiyo Neefsashada Gaarka ah 222nm
Meerkur Bilaash ah - Saaxiibtinimo Deegaanka ah
Waxyeelada Germicidal Wavelength
Yaraynta Waxtarka leh ee Feyraska, Bakteeriyada, iyo Koobka
Heerkulka Hawlgalka ee Balaaran
Isla Markiiba On / Off at Power saarka buuxa
Looma Dhimi Karo Noloshiisa Wareegyada Joogtada ah ama Joogtada ah
Soosaarka sanadlaha ah
Kanfur waxay leedahay xariiq wax soo saar xirfadeed oo noo gaar ah oo leh wax soo saar casri ah iyo farsamo farsameyn, soosaarka sanadlaha ah illaa 100000 nooc.
Xirfadle iyo xasilooni R & D, kooxda wax soo saarka iyo iibinta, oo ay la socdaan 160 shaqaale ah, shirkadu waxay had iyo jeer soo bandhigeysaa hibooyin horumarsan.
Shahaadada shatiga ayaa la helay
Iyadoo koox xirfadlayaal R & D ah, dhammaan alaabooyinka si madax-bannaan loo soo saaray oo aan soo saarnay annaga, waxaan ka helnay 50 shahaadooyin teknoolojiyad shati ah ..
Ganacsiga gudaha iyo ganacsiga shisheeye laba koox oo iib ah, oo loo dhoofiyey in ka badan 50 dal oo adduunka ah iyo iibinta Sannadlaha ah ilaa usd4000000.
Khadadka Waxsoosaarka Madaxa Banaan
Iftiinka UV-ga wuxuu umuuqdaa mid aad u qurux badan oo xasiloon, waxaan helay haddii wiilkeyga la siin lahaa. Waxa kale oo ay leedahay kontoroolka fog, oo aad u fudud in la shaqeeyo. Runtii waa naqshad bini aadamnimo. Runtii waa khibrad iibsasho aad u wanaagsan.
Bixinta DHL waa mid deg deg ah, shan maalmood oo kaliya ayaan helay laambaddayda 'ultraviolet'. Waxaan ugu shaqeeyay si waafaqsan tilmaamaheeda. Way fududahay, saddexda jeer ee jeermiska lagu nadiifiyo, waxaan aaminsanahay inay i siin doonto qol caafimaad leh.
Aad ayaan ugu qanacsanahay laambadan UV-ka ah. Si fiican ayaa loo baakadeeyey oo si dhakhso leh ayaa loo raray. Way fududahay oo dhakhso in lagu isticmaalo kontoroolka fog. Qolka fadhiga, qolka jiifka, musqusha iyo jikada dhammaantood waa jeermis dilaa, mahadsanid
Wax soo baara liiska qiimaha
Tan iyo markii la aasaasay, warshadeenu waxay soosaaraysay alaab heer caalami ah oo heer caalami ah iyadoo u hogaansanaysa mabda'a tayada marka hore Wax soo saarkayagu waxay heleen sumcad aad u wanaagsan oo ku saabsan warshadaha iyo kalsooni qaali ah oo ka dhex jirta macaamiisha cusub iyo kuwii hore ..
Jeermiska jeermiska lagu dilo ee loo yaqaan 'Far-UV' (222 nm Ultraviolet li ...
Muuqaalka guud ee tiknoolajiyada 'Far-UV' (222 nanometer) iyo awoodda jeermiska jeermiska. Natiijada cudurka faafa ee COVID-19 ayaa ah baahi sii kordheysa oo loo qabo nabdoonaanta, goobaha caamka ah ee jeermiska lagu dilo. Waa lagama maarmaan in la yareeyo khatarta ku jirta warshadaha duulimaadka ganacsiga, taas oo hal bilyan oo qof u guurtay adduunka oo dhan 2 ...
Tiknoolajiyadda Siraha Germicidal
Teknolojiyada Siraha Germicidal Markaad baareyso UVC Germicidal Fixtures, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto dhowr nooc oo kala duwan oo tiknoolajiyada nalalka iyo qaabeynta ah. Dhammaan laambadaha UVC waxay aasaas ahaan ka kooban yihiin baqshad quartz ka kooban oo leh meerkuri iyo gaasas kale iyo koronto. Marka laambaddu garaacdo, tamarta b ...
Faa'iidooyinka Nidaamyada jeermiska UV-C waa tiro badan, oo ay ka mid yihiin: Waxtar u leh dhammaan noocyada noolaha yar yar, oo ay ku jiraan bakteeriyada, fayrasyada, fungi iyo protozoa Ma jiraan wax-soo-saarka jeermiga lagu nadiifiyo (DBPs) oo la sameeyay raasumaal hooseeya iyo kharashka hawlgalka oo Fudud si loogu shaqeeyo loona ilaaliyo Ammaan iyo deegaan ahaan f ...